LHRH-A2 for tsindrona Bovines & kisoa - China Ningbo Faharoa hormonina
LHRH-A2 for tsindrona Bovines & kisoa
Luteinizing hormonina hormonina A2 ho an'ny tsindrona (LHRH-A2) Io no hany Corporation mpanamboatra taratasy fanamarinana rehefa lasa GMP ao an-trano eo amin'ny lafiny ny akora ho an'ny Luteinizing hormonina Fanafahana hormonina A2. [Description] entana ity dia fotsy maina Hivaingana-biriky na ny vovoka. [Andrakitra sy ny fampiasana] Polypeptide hormonina zava-mahadomelina. Mety hampiroborobo ny biby Précédent pituitary mba hanafina luteinizing hormonina (LH) sy ny follicle-mandrisika hormonina (FSH), izay ny fahamatorana ny ovarian follicles ...
L uteinizing H ormone R eleasing H ormone A 2 ny tsindrona (LHRH-A 2 )
Ity Corporation no hany mpanamboatra rehefa lasa GMP taratasy fanamarinana ao an-trano in terms of the raw materials for Luteinizing H ormone R eleasing H ormone s A 2.
Io no vokatra fotsy maina Hivaingana-biriky na ny vovoka.
Polypeptide hormonina levitra. Mety hampiroborobo ny biby Précédent pituitary mba hanafina luteinizing hormonina (LH) sy ny follicle-mandrisika hormonina (FSH), izay ny fahamatorana ny ovarian follicles dia nampirisika ny ovulate. Ampiasaina matetika izy io mba hanasitrana ny famokarana atodinaina, hysteresis, tsy mavitrika fihary atodinaina, maharitra Corpus luteum sy ovarian kista ny ronono ombivavy. Mety hampiroborobo ny biby spermatogenesis ho an'ny lehilahy.
Levitra for intramuscular iray tsindrona:
Per ronono ombivavy:
1. ny famokarana atodinaina, hysteresis: intramuscular fampidirana 25-50μg raha insemination no ampiharina.
2. tsy miasa fihary atodinaina: 25μg, indray mandeha isan'andro, dia azo ampiasaina ho 3 andro misesy, ary ny tanteraka, dia tsy ho fatra ny 75μg; amin'ny ankapobeny, ny vokany dia ho tsara kokoa raha tsy rehefa misy mandroso ovarian follicle.
3. Ovarian kista: 25μg, indray mandeha isan'andro, dia azo ampiasaina ho an'ny 3-4 misesy andro, ary ny tanteraka, dia tsy ho fatra ny 100μg.
Fanatsarana ny fako haben'ny: intramuscular fampidirana 25μg nandritra ny manao firaisana
Fanatsarana ny tahan'ny bevohoka plus fako habeny sy mampitombo ny famokarana atodinaina, vokatry Super-: 15-25μg.
Long-teny sy ny fatrany ny fampiharana avo dia hahatonga heterogeneous vokany, izany hoe mazava inhibitory vokany.
Amin'ny ankapobeny, hafa karazana hormonina dia tsy azo ampiasaina raha mbola vokatra io no ampiasaina.
10 × 25μg 10 × 10 × 125μg 50μg
[Term ny mampanankery]
tsy misy fepetra
Previous: Chorionique for tsindrona (GnRH)
Manaraka: LHRH-A3 noho ny tsindrona Bovines & kisoa
Lhrh-A2 Fa tsindrona Bovines & kisoa
LHRH-A3 noho ny tsindrona Bovines & kisoa
Testosterone Propionate tsindrona (Androgen)